Roma Ine Bhiriji Idzva: Unfinished Project yaMichelangelo Ino Yapedzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Roma Ine Bhiriji Idzva: Unfinished Project yaMichelangelo Ino Yapedzwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • wedzero • dzidzo • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Roma ine bhiriji idzva, kana kuti ndoda chikamu charo, chakavakwa munguva yekurekodha nemazana evanozvipira. Iyi ndiyo Ponte Farnese, basa rinotora chirongwa chisina kupera chaMichelangelo mune kiyi saka eco-inogona kuti igone kuyangarara mumhepo.
Bhiriji, rakareba mamita gumi nemasere, rakagadzirwa chose chose nemakadhibhokisi uye akabatwa akamiswa nemabhaluni matatu makuru.
Izvi ndizvo mhedzisiro yehunyanzvi hwemuFrench muimbi Olivier Grossetete pane chirongwa cheMumiriri weFrance pamwe neiyo Institut Francais Italia.
Boka reWebhuild rakatsigirawo chirongwa ichi pamwe nekubatana neVilla Farnesina-Accademia dei Lincei.
IPonte Farnese, inonzi "Ponte tra le Epoche," (Bridge pakati peEpoch) yakavhurwa manheru emusi wa13 Chikunguru, 2021, nekusimudzwa kwebasa munzvimbo yakatambanudzwa yeTiber padhuze nePonte Sisto. Icharamba yakamiswa pakureba kwemamita gumi nemasere kusvika Chikunguru 18, painenge yaburitswa uye kadhibhodhi rakashandiswa pakuvaka - rese rakashandiswazve zvachose.
Kuvaka kwakaitwa mune imwe nzvimbo ye "kubhururuka" saiti yekuvakisa ine mashopu akavhurika kune vanhu veese mazera uye nemirayiridzo yemuFrench muimbi uye pamberi pechikwata chake.
Grossetète haisi itsva kune rudzi urwu rwekuvakwa kwenguva pfupi. Vakaisa mabasa akafanana muFrance, Spain, China neRussia.